Ryanair inodanana neBelfast zvakare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ryanair inodanana neBelfast zvakare
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
ryanair yakagamuchirwa kudzoka kune belfast guta nhandare yendege nemvura saluni yekoni
Ryanair seIreland yakamhara nendege yakadzivirira mabasa kuUK Northern Ireland neguta reBelfast.
Izvi zvachinja izvozvi, uye Belfast anochida, achigamuchira Ryanair nemvura dzemakoni.
Ryanair yadzokera kuBelfast City Airport uye nhasi yatanga chirongwa chayo chezhizha icho chinobatanidza vatakuri kuenda kuEurope zvichitevera kurerutswa kwekurambidzwa kwekufamba muNorthern Ireland.
Ndege dziri kusimuka svondo rino kuenda kunzvimbo shanu dzichabvumira vafambi kunakidzwa nezuva uye kunakidzwa muPortugal neSpain, nendege dzinoenda kuItari kuzoteera kutanga kwaKurume.
Ryanair inoshanda kusvika gumi nemana nendege paFaro muPortugal, nepo vafambi vachizokwanisa kuenda kuAlicante, Malaga, uye chitsuwa chakakurumbira cheBalearic cheMallorca kusvika gumi nemana pavhiki, pamwe neBarcelona kusvika kagumi pasvondo. mumwaka wese wezhizha.
Katy Best, Commerce Director kuBelfast City Airport, akati:
“Nezvirambidzo zvekufamba zviri kureruka, tiri kuona kuwanda kuri kudiwa kubva kune vafambi vane shungu dzekudzoka kubhururuka nekufamba pasi rese.
"Kugamuchira nendege dzekutanga dzeRyanair nhasi kunokosha sezvo kunoratidza kutanga kwerongwa hwekuita zhizha kubva kuBelfast City Airport."
Ndege dzekutanga dzinoratidza kudzoka kweRyanair kuBelfast City Airport zvichitevera makore gumi nerimwe chete asipo. Ndege ichatanga dzimwe nendege kuenda kuValencia, Ibiza, neMilan kuenda ku1st, 2nd, uye 3rd Chikunguru zvichiteerana.
Katy akaenderera achiti:
"Mari yakaderera yeRyanair uye isina kunetsa sevhisi inokwezva kune vakawanda vafambi uye zvinofadza kuti nhandare yendege idzoke ichibhururuka kubva kuBelfast City Airport zvakare."
Ryanair Director weKushambadzira, Dara Brady akati:
“Tiri kufara kudzoka kuBelfast City Airport chirimo chino, tichipa mari shoma kune vatengi vedu kuzororo munzvimbo dzakakurumbira dzeEurope.
"Kuburitswa kwakanaka kwechirongwa chekudzivirira hutachiwana kuUK pamwe nekureruka kwekurambidzwa kwekufamba kwapa kukurudzira kwakanyanya kuvimba kwevatengi uye tinotarisira kugamuchira vatengi vedu nendege dzinoenda kuSpain, Portugal neItari muzhizha rino."
Tsvaga nendege uye neruzivo rwekufambisa nzira dzeRyanair dzemasere matsva ekupenya kwezuva kubva kuBelfast City Airport ku ryanair.co.uk
Nezve razvino zano rekufamba, shanyira nidirect.gov.uk uye Belfast City Airport yakatsaurirwa peji rewebhu.
Vapfuuri vanofanirwa zvakare kubvunza izvo zvichangoburwa zvinodiwa kuti vapinde munyika yavari kuenda kune yavo mazuva ekufamba.